News - China si mara mma ma na-edozi isi ụlọ ọrụ mepụtara n'ime ụlọ ọrụ metụtara a dum ……
China si mara mma ma na-edozi isi ụlọ ọrụ emewo n'ime ụlọ ọrụ metụtara a dum ……
Ulo oru ndi China na ndi edozi isi abanyela na ulo oru ndi ozo di iche iche, tinyere ndi edozi isi, ndi mara mma nke oma, ndi ogwu, ndi nkuzi na ndi nkuzi, ntaneti na ntaneti na ndi ozo di iche. Ka ọ na-erule ngwụsị nke afọ 2019, ọnụ ọgụgụ nke ụlọ ọrụ China na ndị na-edozi isi eruola ijeri yuan 351.26; ọ na-atụ anya na ahịa ọnụ ọgụgụ nke China si mma na idozi isi ụlọ ọrụ ga-ịnọgide na-enwe a compound ibu ọnụego nke 4.6% na-esote afọ ise, na ga-akarị 400 ijeri yuan site 2022.
Salonlọ Mmanya Mma bụ otu na otu, ma ọ bụ ọbụlagodi ọtụtụ na ọnọdụ ọrụ. Oru dum a pere aka, ebe umu nwanyi buru ndi isi. 2020 nke COVID-19 gosipụtara, emetụtala ụlọ ọrụ na-edozi isi oge. Otú ọ dị, dị ka ụlọ ọrụ na-edozi isi bụ ụlọ ọrụ siri ike na-achọ, ọchịchọ maka ịkpụ ntutu na ntutu isi na-aghọwanye ngwa ngwa na ọbịbịa nke ịmaliteghachi ọrụ na oke nke nkewa nke ụlọ. N'aka nke ọzọ, ndị ụlọ ọrụ mara mma nwụnahụrụ ụgwọ ụlọ na ụgwọ ọrụ n'oge ọrịa ahụ.
Na 2021, ọdịnihu nke mmepe ụlọ ọrụ mara mma na ntutu ga-agagharị na ụdị azụmaahịa "”ntanetị", mgbochi ntutu na ngwaahịa nlekọta ntutu ga-abụ ebe oriri na-ekpo ọkụ; ịma mma ahụike na-abụkarị ụdị "ịma mma ahụike ahụike"; mwekota nke ụlọ ọrụ mara mma ga-esiwanye ike, ụlọ ọrụ ahụ ga-abụ ọkachamara.
Post oge: Apr-05-2021